Sababahaan ayay u jecelyihiin raggu dumarka dabada weyn | Raganimo University
Sababahaan ayay u jecelyihiin raggu dumarka dabada weyn
Ragga intooda badan ayaa la ogyahay in ay ku waalanyihiin dumarka qaarka dambe weyn. Oo haddii mid laafyooneysa wadada soo marto la wada fiirinayo balse su'aashu waxay tahay maxaa lagu arkay qaarka dambe? Ma faa'ido ayay u leedahay dhinaca sariirta?
Faa'iidada ugu weyn ee ay u leedahay dhinaca galmada dabada weyn waa mid maskaxda ah. Muuqaalka ayaa qeyb weyn ka ah kacsiga oo maadaama raggu ay jecelyihiin dumarka dabada weyn marka sariirta la fuulo oo ay gacalisada dabada weyn dharka iska dhigto ninka waxaa ku siyaadaya kacsiga. Marka daawashada ayaa ah faa'idada ugu weyn.
Waa sababtaas darteed in ay ragg badan degdeg ku biyo baxaan marka ay gacalisadooda u kalmoodaan iyada oo foorarta. Daawashada uu arkayo dabada weyn ayaa ku labo jibaareysa kacsiga. Sida aan wada ognahay waxaa jira ragg aan kacsan karin oo daawo xitaa qaata. Hadaba ninka ay guriga u joogto xaas dabo weyn waxa uu haystaa fursad weyn.
Sidoo kale waxaa la yiraahdaa raaxada ayay ku macaanyihiin dumarka dabada weyn. Tusaale, marka ninku uu xaaskiisa u galmooda iyada oo foorarta, haddii ay tahay mid dabo yar waxaa laga yaabaa in marka ay hawshu isku daba dhacdo in uu ninku ama iyadu ku xanuunsado is garaaca lafaha balse gabadha dabadaweyn waxay leedahay difaac barkin la mid ah.
Ma jiraan sababo kale ama faa'idooyin kale oo ay leedahay dabada weyn? Nala wadaag fikradaada.